Minisitra Béni-Xavier Rasolofonirina : « Tsy mendrika krizy intsony i Madagasikara » -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisitra Béni-Xavier Rasolofonirina : « Tsy mendrika krizy intsony i Madagasikara »
Nanambara ny minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN), Béni-Xavier Rasolofonirina, nandritra ny lanonana ara-miaramila tamin’ny alalan’ny fanolorana faneva ireo jeneraly vaovao miisa 56 omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, fa tsy mendrika krizy intsony ny firenena.
Noho izay indrindra, dia nilaza ny minisitra fa adidy mavesatra ny miandry ireo jeneraly vaovao ireo, ary mba ho hitan’ny vahoaka fa tsy diso safidy tamin’ny nanendrena azy ireo ho eo amin’ny laharam-boninahitra jeneraly ny Filohan’ny Repoblika.
“Manana adidy goavana amin’ny fampandrosoana ny firenena ny foloalindahy. Noho izay indrindra, dia manana adidy ianareo amin’ny fanandratana avo ny firenena, hiaro ireo andrim-panjakana isan-tokony, hiaro ny vahoaka sy ny fananany, sns”, hoy ny minisitra Béni-Xavier Rasolofonirina.
Notsindriany mantsy tamin’ny alalan’ny famintinana ny tantaran’ny firenena hatramin’ny nahazoana ny fahaleovantena, fa anisan’ny firenena sangany taty Afrika i Madagasikara tamin’ny taona 1960. Voalaza fa noho ny fisian’ny krizy nisesy teto amin’ny firenena, dia tsy marin-toerana ny harinkarena faobe, fa saika niakatra dia nihena kely dia toa izay hatrany hatramin’ny taona 2008. Nihena 4,01% indray mantsy ny harinkarena faobe, ary amin’izao fotoana izao, hoy ny minisitry ny MDN, niakatra 4,1% izany.
Noho izay indrindra, raha ny nambaran’ny minisitra hatrany, dia lasa modely aty Afrika i Madagasikara tamin’ny ezaka vitan’ny fitondram-panjakana tamin’ny fitantanana ny firenena amin’ny ankapobeny.
Ankoatra izay, dia voalaza ihany koa fa tokony hanaja ny soatoavina repoblikana ny olom-pirenena rehetra, sns. “Mila fitoniana ny firenena mba hisian’ny famarinan-toeran’ny fitondram-panjakana amin’ny fampandrosoana”, hoy ny minisitry ny MDN.
Nanipy hafatra ho an’ny fianakaviamben’ny foloalindahy sy ny vahoaka ihany koa ny minisitra tamin’ny fanambarana nataony fa “ilaina ny fitoniana mialoha sy mandritra, ary aorian’ny fifidianana”.
Jeneraly 56 notolorana faneva
Notanterahina omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, ny lanonana ara-miaramila nanolorana faneva ireo jeneraly vaovao miisa 56. Araka izany, dia miisa 34 ireo nasondrotra ho eo amin’ny laharam-boninahitra “général de brigade” zandary sy miaramila, ary 22 kosa nasondrotra ho eo amin’ny laharam-boninahitra “général de division”. Nanotrona ny lanonana sy nanolotra ny faneva kosa ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nonronin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena sy ny seketera jeneraly eo anivon’ny Prezidansa misahana ny zandarimariam-pirenena.
Nanambara kosa ny solontenan’ireo jeneraly, izay zokiny indrindra, teny am-pamaranana ny lanonana fa vonona ny haneho ny asa sy adidy izay hiantsorohany eto amin’ny firenena.
Mitodika eny amin’ny Filankevi-panjakana avokoa ny mason’izao tontolo izao, mikasika ilay fitoriana napetraky ny kandidà Tabera Randriamanantsoa. Misy may volon-tratra tsy mahita tory tokoa amin’izao fotoana izao miandry ny didim-pitsarana hivoaka momba izany… Fakam-panahy « ...Tohiny